Global Voices teny Malagasy » Azia Atsimo : Andiana hafanana sy fahatapahan’ny herinaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Aogositra 2018 5:14 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika (fr) i Fabienne Flessel, imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, India, Nepal, Pakistana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Amin'izao vanintaona izao, tsy gaga amin'ny fahatongavana andiana hafanana any any amin'ny firenena ao Azia Atsimo isika. Kanefa, tsy nampisy orana tao amin'ny faritra mihitsy ny toetrandro maina nandritra izay andro lasa izay, izay ny fiakaran'ny maripàna no vokany mivantana. Fanampin'izany, nampananosarotra ny fiainan'ny olona an-tapitrisany, nahatonga ilay toe-javatra tsy ho zaka mihitsy aza, ny fahatapahana herinaratra (fahatapahana herinaratra mihodina ) noho ny krizy ara-angovo any amin'ny firenena maro.
Tamin'ny zoma lasa teo (ny 24 aprily 2009) no voarakitra ho ny andro tena mafana be indrindra nandritra ny fahavaratra  [amin'ny teny anglisy] (38.5° Celsius) tany Dhaka, renivohitr'i Bangladesh. Mihasempotra arakaraky ny hiakaran'ny merkiora ho any ambonin'ny 45 degre Celsius  [amin'ny teny anglisy] ny ao Atsinanan'i India. Efa maro no maty. Naka fepetra manokana [amin'ny teny anglisy] ny mana-pahefana ao amin'ny vala fitahirizana biby ao Patna mba hiarovana ireo biby amin'ny hafanana. Nisy doro ala  voarakitra tao Nepal ary haintany tany amin'ny faritra izay amin'ny ankapobeny mahazo rotsakorana betsaka  [amin'ny teny anglisy].
Maneho hevitra be manoloana ity toe-javatra ity ireo blaogera. Manome ny heviny mikasika ny hafanana sy ny fahatapahana herinaratra miverimberina i Sukanya M ao anatin'ity lahatsoratra ity, “United We Sweat ” (Miaraka, tsemboka isika) [amin'ny teny anglisy]:
Pfffff. Tena tsy zaka !
Maripàna 40, 41, 41.8° ary hihena ho 39 raha tsara vintana (toy ny androany). Fanampin'izany, mila miantehitra miaraka amin'ny hamandoana, 84% araka ny Yahoo androany (fa toa efa 100% hono ny antsika) ary mazava ho azy, ireo fahatapahana herinaratra na aiza na aiza. Toa kisendrasendra mampihomehy, tapaka nandritra ny 6 ka hatramin'ny 10 ora teo ny herinaratra tamin'ny Alahady tany Dum-Dum ka hatrany Calcutta sy Behala […]
Ireto misy hafatra vitsivitsy tao amin'ny sehatra fitorahana bilaogy bitikaTwitter, izay milaza zavatra lehibe mikasika ny toe-panahin'i Monsieur Tout-le-Monde :
calamur:  Mitsonika mihitsy amin'ity hafanana ity. #mumbai, tena mafana be mihitsy.
vitrag:  Hafanan'ny tolakandro, miditra anaty fiarandalamby ao Mumbai… Letie, ohatry ny any anaty memy (lafaoro).
Maneso ary milaza  i Amit Varma izay miblaogy ao amin'ny The India Uncut [amin'ny teny anglisy]:
Tena mafàna be any Bombay… hoe rehefa manafana ny sakafoko anaty micro-onde aho, tena mbola mangatsiaka kokoa noho ny rivotra manodidina ry lerony.
Any Bangladesh, mijaly mafy noho ity hafanana tafahoatra sy fahatapahana herinaratra matetika ity ny mponina [amin'ny teny anglisy]. Tsy manana fitaovana fampangatsiahana rivotra any an-tokantranony ny ankamaroan'ny olona ary mampiasa fandefasana rivotra mandeha herinaratra, izay tsy misy dikany rehefa misy fahatapahan'ny herinaratra. Tsy afaka ny hanana herinaratra ampy mba hamahanana ireo fitaovana ireo ny manana ny fahafahana mividy onduleur . Vao mainka ratsy, tsy ampy ny herinaratra mba handefasana ny paompin-drano, nihamafy noho izany ny tsy fahampian'ny rano mandeha ary manao fihetsiketsehana ny olonamba hampahafantarany ny fahaleovany fa leo izy ireo [amin'ny teny anglisy].
Afaka mamaky isika ao amin'ny sehatra Twitter [amin'ny teny anglisy]:
dkhall44:  Fahatapahana herinaratra matetika loatra ao Dhaka. Tapaka nandritra ny adin'ny iray isaky ny ora roa ny herinaratra. Ary *38* degré ny mariipàna.
shahreaz:  Tena mifanaraka kokoa amin'ny zava-misy ny fiasana mandritra ny alina. Adiny 6 ny fahatapahana herinaratra mandritra ny fotoana fiasana, tena gaigy be!
Nametraka fandaharan'ireo fahataphana herinaratra [amin'ny teny anglisy] ireo manampahefana amin'ny famatsiana ngovo. Manazava  ny fahatapahana herinaratra ao Dhaka [amin'ny teny anglisy] i Bernie Allen izay mitoraka blaogy ao amin'ny Life & work in Dhaka city:
Mila 2000 megawatt eo isika raha ny salanisa, fa in-dray andro tamin'ity herinandro ity, 1200n watt fotsiny no nomena antsika, noho izany tsy maintsy nalamina ilay elanelana.
Tany Nepal, mihatsara ny toedraharaha amin'ny sehatry ny tsy fahampiana angovo. Mihakely ny fahatapahana herinaratra, izay naharitra teo amin'ny 14 ka hatramin'ny 16 ora  teo [amin'ny teny anglisy] isanandro. Ao amin'ny Twitter, afaka mamaky isika [amin'ny teny anglisy]:
zickme:  Mandalo tsy fahampiasana herinaratra ny firenena ary mba handresena izany, nametraka fanapahana herinaratra 12 ora isanandro ny “Nepal Electricity Authority” (Mpamatsy herinaratra amin'ny sehatra nasionaly).
Nampiakatra  [amin'ny teny anglisy] ny fandaharana fanapahana herinaratra tao Kathmandou ny Geshan's blog, manambara amin'izany ihany, ny fahorian'ny vahoaka.
Isanandro,miatrika fahatapahana herinaratra 8 ka hatramin'ny 10 ora tsy ampoizina  [amin'ny teny anglisy] ny mponina ao amin'ny tanànan'i Karachi ao Pakistana. Nampiakatra sary mampiseho ny fomba iarahan'ny mponina mifandamina miaraka amin'ity hafanana tafahoatra tsy zaka izay tsy mitsahatra ny miha-ratsy isanandro ity ny Pakistan Daily Photo.
Efa niaina hafanana tafahoatra kokoa noho ity i Azia Atsimo, kanefa, manasaro-javatra kokoa ho an'ireo tsy maintsy miatrika izany ny tsy fahampian'ny herinaratra. Eo am-piandrasana fiatoana ho entin'ny orana, mijaly foana aloha ny olona.
Ao Dhaka, sempotra ao anatin'ity andiana hafanana ity, manambara amin'ny fanesoana  [amin'ny teny bengali] ny blaogera Kowshikis :
Tokony hiezaka ny hamokatra orana fa tsy herinaratra ny fanjakana.
Na toy ny tsy dia hendry loatra aza izany, ao anatin'ity toe-javatra tafahoatra ity, tsy afaka ny tsy hieritreritra izany ny mponina ao Azia Atsimo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/05/123887/
 fahatapahana herinaratra : http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lestage_%C3%A9lectrique
 andro tena mafana be indrindra nandritra ny fahavaratra: http://www.bdnews24.com/details.php?id=82325&cid=21&aoth=1
 merkiora ho any ambonin'ny 45 degre Celsius: http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/north,-east-india-reels-as-mercury-above-45%C2%BAc.aspx
 doro ala: http://www.nepalnews.com/archive/2009/mar/mar25/news02.php
 haintany tany amin'ny faritra izay amin'ny ankapobeny mahazo rotsakorana betsaka: http://nepaldendro.blogspot.com/2009/03/freak-weather-travails-for-chirapunji.html
 United We Sweat: http://saintfaron.blogspot.com/2009/04/united-we-sweat.html
 Maneso ary milaza: http://indiauncut.com/iublog/article/its-so-hot-in-bombay/
 ity hafanana tafahoatra sy fahatapahana herinaratra matetika ity : http://carbon-based-ghg.blogspot.com/2008/04/heat-wave-makes-public-life-miserable.html
 manao fihetsiketsehana ny olonamba hampahafantarany ny fahaleovany fa leo izy ireo : http://www.independent-bangladesh.com/200804244714/country/hundreds-protest-over-water-shortage-in-dhaka.html
 14 ka hatramin'ny 16 ora: https://globalvoicesonline.org/2009/02/27/nepal-load-shedding-woes/
 fahatapahana herinaratra 8 ka hatramin'ny 10 ora tsy ampoizina: http://www.geo.tv/4-25-2009/40642.htm
 manambara amin'ny fanesoana: http://www.somewhereinblog.net/blog/kowshikblog/28941558